January 2020 – हाम्रो देश
नोबेल कोरोना भाइरस संक्रमितको सफल उपचार
Posted on 31/01/2020 (31/01/2020) by hamro des
एजेन्सी, १७ माघ । दक्षिणी चीनको गुआंग्डोंग प्रान्तका पहिलो नोबेल कोरोनाभाइरस संक्रमितको सफल उपचार भएको छ ।उपचारपछि क्विन्यआनस्थित एक अस्पतालअघि अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मचारीसँग खिचिएको सामूहिक तस्बिर चिनीया समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले आज प्रकाशन गर्दै सफल उपचार भएको जनाएको छ । सफल उपचारपछि चिकित्सकसँग तस्बिर लिँदै संक्रमित नाम नखुलाइएको ती महिला बिरामीमा पहिलो पटक नोबेल कोरोनाभाइरस (२०१–एनसीओवी)
वि.सं. २०७६ माघ १८,शनिबार, इ.स. २०२० फेब्रुवरी १, शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, ने.सं. ११४० सिल्लाथ्व, माघ शुक्लपक्ष, सप्तमी, १४:५१ उप्रान्त अष्टमी, नक्षत्र– अश्विनी, १८:०९ बजेउप्रान्त भरणी, योग– शुभ, २८:१० बजेउप्रान्त शुक्ल, करण– वणिज, १४:५१ बजेदेखि भद्रा, २७:३९ बजेउप्रान्त वव, आनन्दादिमा सौम्य योग। चन्द्रराशि– मेष,सूर्योदय– ६:५३ बजे, सूर्यास्त– १७:४३ बजे र दिनमान २७
स्वास्थ्य उपचारका नाममा सांसदहरु यसरी गर्छन् ब्रम्हलुट
Posted on 31/01/2020 by hamro des
काठमाडौं । सर्वसाधारण जनताले सहज तरिकाले सामान्य स्वास्थ्य उपचार र औषधिसमेत पाउन नसकिरहेको बेला सांसदहरूका लागि भने औषधि उपचारबापत राज्यले लाखौं रुपैयाँ खर्च व्यहोर्दै आएको छ । सांसदहरूले निजी अस्पतालमा गर्ने महँगो उपचारको भुक्तानीसमेत राज्यले नै गर्दै आइरहेको छ । निजीमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत र सरकारीमा गर्ने उपचारको पूर्ण खर्च सरकारले नै
स्याल हुइँया नगर्नोस्, अमेरिकाले चाह्यो भने ‘सुलेमानी’ बनाइदिन्छ : सन्चारमन्त्री
Posted on 30/01/2020 by हाम्रोदेश
काठमाडौं । सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘एमसीसी’ सम्झौता लागू गर्दा नेपाल–अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने दाबी गर्नेहरुलाई ‘स्याल हुइँया’ भनी व्यंग्य गरेका छन् । सन्चार मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ‘एमसीसीलाई सैन्य गठबन्धन भनेर स्याल हुइँया नमच्चाउन’ सुझाव दिए । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गर्दै उनले हरेक विदेशी
सोझा जनतालाई कर धेरै भयो, घटाउन गृहकार्य गर्दैछौंः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले करको दर घटाउने बताएका छन् । करको दर धेरै भयो भनेर देशभरबाट गुनासो आएकोले घटाउन लागिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सको २९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । तीन तहको सरकार भएको र तीन तहकै सरकारले कर उठाउन थालेका कारण करको
४८ वर्षिय युवा नेता नेविसंघको अध्यक्षमा मनोनित
काठमाडौँ । एक वर्षदेखि विवादमा चल्दै आएको कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघको तदर्थ समिति अध्यक्षमा ४८ वर्षिय नेता राजीव ढुंगाना मनोनीत भएका छन् । कांग्रेस शीर्ष नेताहरुबीच गत शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार सुनसरीका ढुंगानालाई बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षमा मनोनीत गरेका हुन् । उनी नेविसंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप पौडेलको कार्यकालमा मनोनीत कोषाध्यक्ष थिए। बिद्यार्थी संगठनको अध्यक्षमा ४८
काठमाडौं : श्रीमान डेढ बर्षदेखि कोलकोतामा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका डेढ बर्षिया छोरा पनि छन् । यसैबिच श्रीमती कसरी गर्भवती भइन् भनेर प्रश्न गरिनु सामान्य कुरा हो । याे घटना भारतको जगदीशपुरमा घटेको छ । भाउजु गर्भवती भएको थाहा पाएपछि नन्द पुलिसकोमा पुगेकी छिन् । उनले भाउजु ३ महिनादेखि गर्भवती भएको बताइन् । यसैबिच ती
क्रिस गेल क्रिकेट खेल्न पोखरा आउँदै : सी यू सुन नेपाल (भिडियाेसहित)
काठमाडौं : वेस्ट इन्डिजका प्रभावशाली चर्चित ब्याट्सम्यान क्रिस गेल एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) टी-ट्वान्टी खेल्ने भएका छन् । पोखरा राइनोजले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गेललाई आफूले अनुबन्ध गरेको जानकारी दिएको हो । जसअनुसार उनी आगामी ईपीएलमा पोखरा राइनोजबाट खेल्नेछन् । आइकनिक खेलाडीको रुपमा खेलाउन लागेको बताइएको छ । गेलले आफ्नो ट्वीटरबाट पनि भिडिओ सन्देश सार्वजनिक गरेका
Posted in खेलकुदLeaveacomment
एउटै अमलामा पाइन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा बढी भिटामिन (फाइदा सहित)
Posted on 30/01/2020 (30/01/2020) by हाम्रोदेश
काठमाडौं : अमला हामीले सधैँ खाइरहेको फल हो । अमला के हो ? भन्ने विषयका सबैलाई जानकारी हाेला । त्यसै पनि अहिल अमलाको सिजन हो । बजारमा प्रशस्त मात्रामा बिक्रीका लागि अमला ल्याइएका हुन्छन् । अमलाले मानव स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने फाइदाका विषयमा सबैलाई जानकारी नहुँन सक्छ । अमलाको प्रयोग धेरै किसिमको औषधिका रुपमा गरिन्छ । आयुर्वेदमा
Posted in स्वास्थ्यLeaveacomment
चार वर्षको प्रेमपछि प्रतिभा घिमिरे र क्रिकेटर सोमपाल कामीको बिहे
माघ १६ काठमाडौँ । क्रिकेटर सोमपाल कामीले चार वर्षअघि प्रतिभा घिमिरेलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। प्रतिभाले जवाफ दिन झन्डै दुई साता लगाइन्। सन् २०१६ मार्च महिनाका ती दुई साता सोमपालको निम्ति दुई जुनी बराबर भयो। त्यसपछि प्रतिभाले जे जवाफ दिइन्, त्यसले यो जोडीलाई जुनी-जुनीको निम्ति एकअर्कासँग बाँधेको छ। यो खबर सीताराम कोइराला र निशा भण्डारीले